सम्झनाको यसरी लिइएको रहेछ ज्यान, प्रहरीसंग राजेन्द्रले दिए यस्तो वयान – live 60media
सम्झनाको यसरी लिइएको रहेछ ज्यान, प्रहरीसंग राजेन्द्रले दिए यस्तो वयान
काठमाण्डौं । १२ बर्षिया बालिका सम्झना कामीको ज्यान लिएको आ’रो’प लागेका राजेन्द्र बोहोराले अन्नत घटना स्वीकारेका छन् । बझाङ जिल्ला, मस्टा गाउँपालिका–२ खिकालाका राजेन्द्र बोहराले घटना स्वीकार गरेका हुन् । उनले गत हप्ता सोही ठाउँकी १२ वर्षीया सम्झना कामीको ज्यान लिएका थिए । त्यही दिन पक्राउ परेका बोहराले आठ दिनपछि बुधबार प्रहरीसामु घटना स्विकारेका हुन् ।
गोठ हिँडेकी सम्झनालाई खिकाला गाउँबाट १५ मिनेट टाढा रहेको सिमथला जं ग लबाट नियन्त्रणमा लिएर ज्यान लिएको उनले साविती बयान दिएका छन् । उनले मन्दिरभित्र रहेको त्रि’शू’ल र घ’नले हा’नेर ह’त्या’ गरेको प्रहरीसमक्ष स्विकारेका छन् ।
← आजदेखि उपत्यकासहित देशभर सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन
सम्झनाका बुवा भ’क्का’निदै भन्छन ! ‘छोरी जन्माउने सबै पापी हुन्, म पापी हुँ’ ! ‘मेरी फूलजस्ती छोरी …. →